Ngwa 8 kacha mma akwụkwọ ahụ aja maka Android | Akụkọ akụrụngwa
The 8 kacha mma na akwụkwọ ahụ aja ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Villamandos | | android, Mobiles, software
Android bụ sistemụ arụmọrụ na-enye anyị ohere dị ukwuu nke ịhazi na ihe ọ bụla ngwaọrụ, nke doro anya na-akpali mmasị maka onye ọrụ ọ bụla. Otu n'ime ihe ndị na-enye anyị ohere ịhazi bụ akwụkwọ ahụaja, nke anyị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ndị ahụ ngwaọrụ na-eweta na ndabara ma ọ bụ mee ya site na otu n'ime ọtụtụ ngwa akwụkwọ ahụaja dịnụ.
Kpamkpam banyere ụdị ngwa a anyị chọrọ ịgwa gị okwu taa ma achọta anyị họrọ 8 kacha mma na akwụkwọ ahụ aja ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo, nke ga-enye anyị ohere ịnweta akwụkwọ ahụaja nke ngwaọrụ anyị na-amasị anyị ma bụrụ nke ahaziri iche.
Ọ bụrụ na ịmaghi ihe akwụkwọ ahụaja ga-etinye na gam akporo gị, gaa n'ihu na-agụ ma lelee ngwa ndị a nke ga-enyere gị aka ịgbanwe akwụkwọ ahụaja gị kwa ụbọchị, na-enwe ike ịhọrọ ọmarịcha, ọchị ma ọ bụ melancholic.
2 Ihe na akwụkwọ ahụ aja
4 MultiPicture Live Akwụkwọ ahụaja
5 Cool na akwụkwọ ahụ aja HD
8 PicSpeed ​​HD na akwụkwọ ahụ aja
Ogologo oge Zedge Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị ebudatara na Google Play, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ụlọ ọrụ gọọmentị gọọmentị. N'ihi nnukwu akwụkwọ ahụaja maka gam akporo ọ na-enye anyị, na mgbakwunye na ụfọdụ nhazi ndị ọzọ, ọ jisiri ike merie ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ.
Na Zedge anyị nwere ike ịchọ n'etiti ọtụtụ puku akwụkwọ ahụaja dị site na edemede dị iche iche ma ọ bụ mee nyocha maka otu oge. Na mgbakwunye, n'etiti ọrụ ndị a na-akpali ngwa na-enye anyị bụ nke inwe ike ịtọ akpaka mgbanwe nke anyị akwụkwọ ahụaja n'etiti ọtụtụ. Na nke a, anyị agaghị ebu otu akwụkwọ ahụaja ahụ mgbe niile ma anyị agaghị echegbu onwe anyị banyere ịnwe ịgbanwe ya site n'oge ruo n'oge.
Iji mechie ngwa a na-adọrọ mmasị, anyị ga-agwa gị na enwere ike ibudata ya n'efu. Nwere ike iji njikọ nke ị ga-ahụ n'okpuru iji budata ya ugbu a na ngwaọrụ gị.
ZEDGE ™ ™da ụdaolu na Azụ
Ihe na akwụkwọ ahụ aja
Aha nke ngwa, Ihe na akwụkwọ ahụ aja, Ọ na-enyerịrị anyị ọtụtụ njiri mara nke ihe anyị ga-achọta na nke ahụ bụ na ịdị mfe bụ ọkọlọtọ ya, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na anyị ga-enwe ike ịkwụsị ịnweta nnakọta nke onyonyo anyị nwere ike idowe n'ụzọ dị mfe dị ka akwụkwọ ahụaja anyị gam akporo ngwaọrụ.
N'ihi ngwa a Anyị nwere ike ịhọrọ atụmatụ sitere na nkesa Linux OS Luna ma jiri ya na ama ma ọ bụ mbadamba anyị dị ka akwụkwọ ahụaja. Di iche iche di iche iche dika anyi kwurula buru ibu na onyogho nile, na mgbakwunye na iwu zuru oke, mara ezigbo mma.
Nke a bụ ihe ọzọ na ngwa ndị ahụ anaghị adị maka nbudata na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google, mana ọzọ enweghị ihe egwu nke ibudata ya na ngwaọrụ gị, ọ bụrụhaala na ị na-eme ya site na njikọ anyị na-enye gị maka ya n'okpuru .
Download elementary na akwụkwọ ahụ aja HERE
Otu n'ime nnukwu ọghọm anyị na-achọta n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ gam akporo ọ bụla bụ na ụfọdụ onyonyo, were igwefoto, enweghị ike ịmegharị n'ụzọ ziri ezi dị ka akwụkwọ ahụaja. Mgbidi na-enye anyị ohere ịhọrọ ihe oyiyi ọ bụla site na gallery anyị wee họrọ ya dị ka akwụkwọ ahụaja, na-enweghị ibelata ya iji mee ka ihu ya ma ọ bụ ụdị ya.
Nke a doziri a kama iru ala nsogbu na ọtụtụ ndị ọrụ na-ata ahụhụ kwa ụbọchị, na-na-ezi ihe dị iche n'adịghị ka ndị ọzọ yiri ngwa.
MultiPicture Live Akwụkwọ ahụaja
Dị ka aha ya na-ekwu, na MultiPicture Live Akwụkwọ ahụaja Anyị ga-enwe ike ịtọlite ​​ọtụtụ desktọọpụ nzụlite, ọkachasị nke ọ bụla maka ihuenyo ọ bụla, ma nwekwaa ọtụtụ akwụkwọ ahụaja na nke ọ bụla nwere ihu igwe anyị nwere ma ọ bụ nke anyị na-eji oge niile.
Enwere ike ịhọrọ ihe oyiyi site na nnukwu ọba akwụkwọ nke ngwa ahụ na-enye anyị, kamakwa site na gallery anyị. Otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mma nke ngwa a na-enye bụ pohere nke ịmepụta ego ọ bụla maka oge.
N'ezie, m ga-agwa gị na mgbe m nwesịrị ngwa a na ngwaọrụ gam akporo m, emechara m anya ntakịrị ma hụ onyogho na ihuenyo ọ bụla anyị nwetara nwere ike ịbụ onye nzuzu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ejighị ya. Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ka ị hụ onyonyo na ihuenyo ọ bụla ma ọ bụ na ọ masịrị gị, MultiPicture Live Wallpaper kwesịrị ịbụ ngwa nkụnye eji isi mee gị.
Cool na akwụkwọ ahụ aja HD
Akwụkwọ akụkọ Cool HD bụ ihe ọzọ na otu nke ndị ngwa na-ekwesịghị-efu efu ọ bụla na ngwaọrụ na ihe gam akporo sistemụ na nke ahụ bụ na ọ na-eme ka ọ bụla onye ọrụ a nnukwu ego nke na akwụkwọ ahụ aja, na HD mkpebi.
Ọ ga-emekwa ka anyị tinye ihe oyiyi ọ bụla site na gallery anyị dị ka akwụkwọ ahụaja, n'ụzọ dị mfe ma nwee ike imeghari nha ya n'oge ọ bụla.
Kappboom - Cool na akwụkwọ ahụ aja na Foto ndị HD
Developer: Ụlọ ọrụ Kappboom Inc.
Mgbidi bụ ihe ọzọ na ngwa ndị ahụ pụtara ihe niile maka ịdị mfe ya, yana ịghara ịme ka ndụ anyị sie ike na ihe dị mfe dịka ịhọrọ akwụkwọ ahụaja ga-adị. Oyiyi oyuyo nke ngwa a bu ihe enwere enviu na anyi nwere ike ihu akwukwo ngebichi anyi n’etiti ihe kariri nde ihe oyiyi di iche iche.
Ya mere na ị gaghị efu n'etiti ọtụtụ ihe oyiyi, anyị nwere ike ịchọ ihe anyị chọrọ site na nyocha site na edemede dị iche iche ma ọ bụ isiokwu.
N'ezie ngwa nwere ike ibudata kpamkpam n'efu na ị kwesịrị ị na-echegbu onwe n'oge ọ bụla banyere mmalite nke ihe oyiyi ebe ha bụ ndị mbiet isi nke otu aha dị ka ngwa. Ọ baghị uru ikwu, mpaghara iwu zuru oke.
Isi, HD na akwụkwọ ahụ aja Free
Blurone Ọ bụ ikekwe otu n'ime ihe ndị kasị kemmasi ngwa na anyị nwere ike ibudata na anyị gam akporo ngwaọrụ nke ebe a akwụkwọ ahụaja, ee, dị nnọọ iche na ihe anyị na-eji. Ma ọ bụ na ngwa a ọ ga-eme ka anyị tinye nsonazụ mmetụta na onyonyo ọ bụla ma gbanwee oyiyi mbụ.
Iji nye ha mmetụta achọrọ anyị nwere ike iji ngwa ọ bụla, ọbụlagodi nke ejiri igwefoto nke ngwaọrụ anyị. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta ihe ndị anyị kere site na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche.
Blurone: blur mmetụta akwụkwọ ahụaja & n'ọdụ ụgbọ mmiri
Developer: AKWUKWỌ AKWECKWỌ
PicSpeed ​​HD na akwụkwọ ahụ aja
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ inwe akwụkwọ ahụaja na gam akporo gị, yana mkpebi HD zuru oke nke 1080p, nhọrọ kachasị mma iji nweta ya bụ iji ngwa ahụ. PicSpeed ​​HD na akwụkwọ ahụ aja. N'ime ya ị ga-ahụ nke kachasị ike kachasị nchịkọta foto dị elu, nke na-emezigharịrị na usoro nha.
O di nwute na enweghi ya site na Google Play, mana nkwanye anyi bu na inwere ike ibudata ya n’atụghị egwu. Tụkwasị na nke a, iji mechie nhọrọ ndị ọ na-enye, ị ga-ahụ ohere nke ịkụcha ihe, na-agbanwe ma ọ bụ na-agbanwe ihe oyiyi ọ bụla dị.
Download PicSpeed ​​HD na akwụkwọ ahụ aja HERE
Kedu ngwa ị na-ejikarị ahọrọ ma debe akwụkwọ ahụ aja nke ngwaọrụ gam akporo gị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » The 8 kacha mma na akwụkwọ ahụ aja ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Zeblaze Cosmo, smartwatch dị ike, mara mma nke nwere ọnụ ahịa dị mma
Gam akporo n'ihi na onye ọ bụla; Kedu ihe bụ bootloader?